आज कुन राशी हुनेले के गर्दा आजको दिन लाभदायी होला ? हेर्नुस् राशीफल - Sacho Post
आज कुन राशी हुनेले के गर्दा आजको दिन लाभदायी होला ? हेर्नुस् राशीफल
२०७७ भाद्र ९, मंगलवार ०७:४६ बजे
वि.सं. २०७७ साल, भाद्र महिना, ०९ गते, मङ्गलवार, भाद्रपद (शुक्ल ञलाथ्व) सप्तमी, विशाखा नक्षत्र, तुला राशिको चन्द्रमा, ब्रह्म योग, वणिज र विष्टि (भद्रा) करण, प्रमादी संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, आजको चाडपर्व र उत्सव : अमुक्ताभरण सप्तमी, महालक्ष्मी व्रतारम्भ, गौरा सप्तमी, भक्तपुरमा मंगलकुण्ड मेला, त्रिपुष्कर योग दिनको ०४.३० बजेसम्म, भद्रा करण बेलुका ४.३० बजेदेखि मध्यरात्रीपछि ३.२४ बजेसम्म, आजको मूहुर्त : रुद्राभिषेक(शिववास जुरेको, रुद्री/पूजा गर्न मिल्ने दिन), अग्निवास (सामान्य यज्ञ र हवन गर्न मिल्ने दिन), कलशचक्र, भोलिको चाडपर्व र उत्सव : बुधाष्टमी व्रत, दूर्वाष्टमी व्रत, गौरा पर्व, गोरखकाली पूजा, काय अष्टमी, कागेश्वर मेला, राधाजीको जन्मोत्सव, थकाली फालो पर्व, ललितपुरमा दशमहाविद्यापूजा, भोलिको मूहुर्त : वस्त्राभरण(गुन्युचोलो), डेरा सर्ने, कलशचक्र ।
गरेको काममा ढिलै भए पनि उपलब्धिमूलक हुनेछ । व्यापार व्यवसाय र रकार्यक्षेत्रमा संयमता गुमाउनु हुँदैन । निर्णय गर्नुअघि जान्ने बुझ्नेको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ । परिवारजनको साथले नयाँ आशा जगाउनेछ। दिउँसोदेखि कामको चाप बढ्नेछ भने गोपनीयता बाहिरिनाले समस्या पर्ला। स्वास्थ्यका लागि व्यायाम र खानपानमा ध्यान पुर्याउनुहोला।
बिहानीपख तर्क, बहस र झैझगडाको वातावरण बन्न सक्छ । आज मान प्रतिष्ठा बढाउने समय छ । सुख सुविधा बढाउने सामानको किनमेल हुनेछ । आजको विनियोजन र लगानीले फाइदा पुग्नेछ । केही आर्थिक समस्या समाधान हुनसक्छ । हिम्मत गर्दा जटिल काम समेत सम्पादन हुनेछ। मिहिनेतले नयाँ अवसर दिलाउन सक्छ।
आत्मबल बढ्नेछ । बौद्धिक र चिन्तमूलक कार्यमा समय बित्नेछ । घर परिवारबाट सहयोग मिल्नेछ । व्यापार व्यवसाय मध्यम रहेको । आजको लागि जिद्दीपन हानिकारक हुनुपर्नेछ । खानपिनमा ध्यान दिनुहोला । रोकिएका काम बन्नाले नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइनेछ। शत्रुबाधा हट्नेछ। रोगसमेत निवारण हुने समय छ।
हाकिम वा अभिभावकलाई खुशी तुल्याउन सकिदैन । आश्वासन दिनेले धोका दिनेछन् । ससाना कुरामा विवाद हुनसक्छ । विश्वासपात्रबाट धोका हुन सक्छ, सजग रहनुहोला। समयमा निर्णय लिन नसक्दा काम रोकिन सक्छ। दिउँसोदेखि स्थितिमा सुधार आउनाले नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइनेछ। साथीभाइको सहयोग जुट्नेछ। आवेशमा आएर कुनै पनि निर्णय नगर्नुहोला ।
पराक्रम र प्रसिद्धी कमाउने समय छ । पेसागत उन्नतीका विषयमा विभिन्न चुनौतिका बिषयमा छलफल हुनेछ । मान सम्मान र ख्याति कमाउने समय छ । आज गरेको चिन्तनले थोरबहुत सहयोग पुग्नेछ । चिताएको काममा बिहानै जुट्नुहोला, सोचेजस्तै सफलता मिल्नेछ। दिउँसोदेखि विश्वासिला व्यक्तिहरूले धोका दिने हुँदा काम रोकिन सक्छ। सानो कमजोरी सच्याउन काम दोहोर्याउनुपर्ला।
हाँकेका ताकेका काममा सफलता मिल्नेछ । विगतको श्रमबाट प्रशस्त लाभ मिल्नेछ । रोकिएको काम सम्पादन हुनेछ । आम्दानीको विकल्पको बारेमा छलफल हुनेछ । पराक्रम र प्रसिद्धीमा बृद्धि हुनसक्छ । सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् र चिताएको काम सम्पादन हुनेछ। आलोचकहरू पनि व्यवहारले नजिकिन सक्छन्। आजको मिहिनेतले दिगो फाइदा दिलाउनेछ। आयआर्जनका विविध स्रोत फेला पर्नेछन्।
प्रतिष्ठित काम गर्ने समय छ । वस्त्र अलंकार वा कुनै भौतिक साधन जोड्ने विचार आउन सक्छ । नसोचेको धन हातमा आइपर्न सक्छ । महत्वपूर्ण ठाउँमा बोलि बिक्नेछ । दिगो योजना प्रारम्भ हुनेछ। मीठो भोजनको अनुकूलता मिल्नेछ । व्यापार व्यवसाय र कार्यक्षेत्रबाट समेत फाइदा पुग्नेछ । पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्ध सुदृढ हुनेछ ।
आत्मबल र हौसला नत्यागेमा आज आँटेका काममा सफल हुनेछ । विगतको कमजोरी सुधार्दै काम सम्पन्न गर्ने समय छ । जसले गर्दा अर्थलाभ हुनेछ । दिन ढल्दै जाँदा मनमा हौसल र असन्तुष्टिहरु पनि समाप्त हुँदै जानेछन् । कार्यक्षेत्र र व्यापार व्यवसायमा देखिएका समस्याहरु समाान हुनेछ । अधुरा कामहरु पूर्ण हुन थाल्नेछन् ।
प्राज्ञिक क्षेत्रबाट लाभ लिन सकिनेछ । विश्वासको वातावरण बन्नेछ कामकाजको चाप बढ्नेछ । यद्यपि आजको कामले दिर्घकालिन फाइदा हुनेछ । पेसा र व्यवसायले राम्रो लाभ दिनेछ। आयआर्जनका विविध स्रोत फेला पर्नेछन्। बेलुकीपख श्रमको उचित मूल्यांकन भए पनि प्रतिफलका लागि समय पर्खनुपर्नेछ। आँटेको कामको लगानी अरूका लागि खर्च हुन सक्छ।
अभिभावकको आशिर्वादले आजको हरेक चिन्ता र कष्ट दुर हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा सोचेजति लाभ हुनेछ । आफ्नो क्षेत्रमा साख हुनेछ । श्रममूलक कामबाट फाइदा हुनेछ । प्रभुत्व जमाउँदै दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्नेछ।
पारमार्थिक र जनकल्याणका काममा खट्ने समय छ । रचनात्मक कार्यक्रमा सफलता मिल्नेछ । आयआर्जन समेत राम्रै रहको छ । आँटेको काममा सफलता मिल्न सक्छ । यद्यपि सानो कामको लागि पनि आज धेरै खट्नुपर्ने हुनसक्छ । शुभचिन्तकहरूले साथ दिनाले पहिलेको चुनौती समाप्त होला। दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। मेहनतले पदीय जिम्मेवारी दिलाउनेछ। विशेष अवसर प्राप्त हुनाले मन प्रफुल्लित हुनेछ।
दिर्घकालिक काम बेलुकीपख गर्नु राम्रो हुनेछ । भाग्यबलमा कमि आएको समय छ । व्यापार व्यवसायमा उतारचढाव आउन सक्छ । बेलुकीदेखी विस्तारै निराशा र समस्याहरु दुर हुँदै जानेछन् । आजको दिनमा सापटी माग्न आउनेलाई आज इन्कार गर्दा नै फाइदा हुनेछ । कामको चाप बढ्नेछ भने वादविवादले मन खिन्न तुल्याउनेछ। स्वास्थ्यका लागि व्यायाम र खानपानमा ध्यान पुर्याउनुहोला। प्रयत्न गर्दा भौतिक सुविधाका वस्तुहरू जुट्नेछन्।